လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မြို့မှ မြန်မာကလေးသူငယ်များ ဗမာစာ တတ်တော့မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မြို့မှ မြန်မာကလေးသူငယ်များ ဗမာစာ တတ်တော့မည်
လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မြို့မှ မြန်မာကလေးသူငယ်များ ဗမာစာ တတ်တော့မည်
Posted by kai on Jan 14, 2010 in Community & Society, Cultures, Literature/Books, U.S. News |3comments
Los Angeles Myanmar Language
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်လောက်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အမေရိကမြေမှာမွေး၊ အမေရိကမှာကြီး ဒီလေကိုရှု၊ ဒီရေကိုသောက်တဲ့ မြန်မာတွေ ဗမာစာ မတတ်ကြပါဘူး၊ တတ်တဲ့သူအင်မတန်မှကို ရှားပါတယ်ခင်ဗျား၊ စာ ဆိုလို့ စကားရော မေးလာရင် အင်း…စကားလည်း မတတ်ကြပါဘူး၊ တတ်တဲ့သူရှားပါတယ်ခင်ဗျား၊
ရှားပြီးရင်းရှားနေတဲ့ ဒီပြသနာကို ပြေလည်အောင် အခြေကျနေပြီဖြစ်ကြတဲ့ မြန်မာတွေစီစဉ်ကြည့်တာပါ။ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ပါ။
တကယ်က မြန်မာဇာတိနွယ်ခေါ်ရမဲ့ မြန်မာ့သွေး ပါသူ မြန်မာပြည်ဇာတိ မိဘတွေက မွေးဖွားလာသူတွေမို့ မြန်မာစာ၊စကားတတ်သင့်ပါတယ်။
ဒီတော့ မြန်မာစကားတတ်ရင် ဘာတွေ အကျိုးရှိမှာလည်း မေးစရာရှိပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ..။
နောက် အနှစ် ၃၀ (၃၀)စောင့်ကြည့်ပါခင်ဗျား။
နောက်အနှစ် ၃၀ အတွင်းမှာ မြန်မာပြည်ကြီးဟာ ကမ္ဘာ့ရှေ့တန်း ရောက်မလာဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး၊
နောက်အနှစ်၃၀ အတွင်းမှာ မြန်မာ့စာပေ ကမ္ဘာတန်းရောက်မလားဘူး ဘယ်သူမှ အာမခံ မပြောနိုင်ပါဘူး၊
နောက်အနှစ်၃၀ အတွင်း မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေ မကြီးမား၊ မကြီးထွားနိုင်ဘူး ဘယ်သူမှ မပြောထားပါဘူး။
အောက်တန်းကျလွန်းလှပြီဖြစ်တဲ့ အမိမြေဟာ ရှေ့လျှောက်တက်ရဖို့ သာ ရှိပါတယ်။ (ကျဖို့ နေရာလည်း မရှိတော့ပါဘူး)
တက်လာတဲ့အချိန် နောင်တမရကြစေဖို့ ကိုယ်ခလေးတွေကို လက်ဆွဲပြီး “ကျောင်းကိုပို့ လိုက်ကြပါ။”
အောက်မှာ သတင်းနဲ့ ဆက်သွယ်ရမဲ့ နံပါတ်တွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ သတင်းက မန္တလေးဂေဇက်သတင်းစာမှာလည်း ပါပြီးဖြစ်ပါတယ်…။
အမေရိကနိုင်ငံ လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မြို့ အခြေစိုက်တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမြန်မာအသင်းမှဦးဆောင်၍အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိ အခြေချနေထိုင်နေကြသည့်မြန်မာဇာတိနွယ်မိသားစု
များမှပေါက်ဖွားလာသော မျိုးဆက်သစ် ကလေးနှင့်လူငယ်များအား အခြေခံမြန်မာစာ၊ စကားနှင့် အရေးအဖတ် တတ်မြောက်စေရန်ရည်ရွယ်သည့်မြန်မာစာအရေးအဖတ်အပြောသင်တန်းကို၂၀၁၀ပြည့်နှစ်ဇန်န၀ါရီလ၁၇ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
မြန်မာစာအရေးအဖတ်အပြောသင်တန်းကို လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မြို့ မွန်ထရီပတ်မြို့နယ်ရှိ ‘အောင်ဇေ’ခန်းမအမှတ် ၆၂၉နွမေလနပ ဗလနယ ဩညအနမနပ ဏမေုယ ဃဗ ၉၁၇၅၅ တွင်သင်ကြားပို့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့လည်၁၂နာရီမှ၂နာရီအထိစနစ်တကျသင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
သင်ကြားပို့ချမည့်ဆရာမများ သင်တန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့အမက(၁၀)လှိုင်မှ အငြိမ်းစားကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်စန်းစန်းလွင်၊ ဗဟန်းအထ(၂)မှအထက် တန်းပြ ဆရာမဒေါ်ဝေေ၀လှိုင်၊အမေ့ကျောင်း ပျိုးခင်းမှဆရာမဒေါ်မိုးချိုသင်းနှင့် မသွဲ့သွဲ့ခင်၊ မလေးနိုင်အိတို့ကဆရာမများအဖြစ် ခေတ်မီနည်းစနစ်တို့ဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာစာသင်ကြားရေးသင်တန်း ရေရှည်အောင်မြင်ရေးအတွက် အတွေ့အကြုံရှိသောကျောင်းဆရာ၊ဆရာမများအပြင် စိတ်ဝင်စားပြီး လုပ်အားပေးလိုသူများ၊ သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်း လှူဒါန်းလိုသူများသည် တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား မြန်မာအသင်းနှင့် ဆက်သွယ်ကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းသိ ရသည်။
မြန်မာစာ၊ စကား၊ ပြောဆို၊ ရေးဖတ်တတ် မြောက်လိုသည့် အသက်၅နှစ်နှင့် အထက် ကျောင်းသူကျောင်းသားများမည်သူမဆိုစာရင်းပေးသွင်း တက်ရောက်နိုင်ပြီး သင်တန်းကြေးမှာအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Suggestion: At this point, the classes’ location is not readable. The street name and the city name have “typos.” Need to re-type them.
629 E Garvey Ave, Monterey Park, CA 91755 U.S.A
တော်တော်ကောင်းတဲ.အစီအစဉ်ပါဗျာ။အားပေးပါတယ်ဆက်လုပ်ပါနော်။အောင်မြင်မှာသေချာပါတယ်။မြန်မာဘာသာတွေနောင်အနှစ်သုံးဆယ်တောင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးနေ.ချင်းညချင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တောင်းဆိုရအုံးမယ်။မြန်မာတွေ Myanglish တွေသုံးတာနဲ.ပတ်သတ်ပြီမေ၇းသင်.ကြောင်းဆောင်းပါးလေးတွေေ၇းပေးပါလားဗျာ။မြန်မာလိုေ၇းလို.၇တာကိုဗျာ။အင်္ဂလိပ်လိုေ၇း၇မယ်လို.မဆိုလိုပါဘူးဗျာ။